VIDIO ARSIV - RayHaber
[21 / 08 / 2019] KARDEMİR malitere Mass Production of Train Wheels na Septemba	78 Karabuk
Njem na akụkọ ihe mere eme na Istanbul 'Ejiji Ewu'. Istanbul bụ obodo eji emegharị ụzọ kwa ụbọchị yana mpaghara mmezi ya gbasawanyere kemgbe ụwa. Transportationgbọ njem obodo dị site n'ocheeze ruo na strolle, rue tramway ruo trolley, ruo ụgbọala ndị dị ugbu a, ụzọ ụgbọ oloko, bọs, obere ụgbọ ala. [More ...]
Mgbe ha gbusịrị ịkụ azụmaahịa 2 na Sarıyer, ndị mmadụ rapaara na obere obere ụgbọ elu na-efega n'oké osimiri zọpụtara ndị ọrụ IMM n'ihi ogologo mbọ. İSPARK - İSTMARİN ndị ọrụ na Istanbul Metropolitan Municipal (IMM) Nur Muhammed Yazıcı, Kerem Kalender na Sefa Erbil, [More ...]
Antalya Tram Times, utezọ na Oge Ego 2019
Ejiri 2010 rụọ ọrụ na Antalya site n'aka Obodo ukwu nke Antalya. Etap Light Rail line na-amalite site na mpaghara Fatih ma kwụsị na Meydan ọdụ mpaghara. Ahịrị gbasara 1 km. enwere ọdụ ụgbọ njem 11. Estkwụ na ọdụ ụgbọ ọdụ niile [More ...]
13 / 08 / 2019 Levent Ozen 0
Istanbul-Izmir okporouzo moto Toll Nsoro na Project Cost: The mgbe nọ otu n'ime Turkey kasị mkpa okporo ụzọ oru ngo. Marmara na Aegean ga-abịaru nso ugbu a. Istanbul-Izmir n'etiti awa 9 na 3 na ọkara [More ...]
Onye nyocha obodo İmamoğlu nyochaziri na mpaghara Be Exiktaş Metro Excavation Area
Onye isi ala EkBB Ekrem İmamoğlu mezuru nkwa ya tupu e mee oriri a, “A ga m anọ n'okporo ámá nke Istanbul”. Nke mbu, İmamoğlu gara ebe a na-ewu oflọ ọrụ Beşiktaş nke Kabataş - Mahmutbey metro Line. Ğinde Mgbe arụchara ụlọ ọrụ a, ụlọ ọrụ a ga-abụkwa ebe ngosi nka ”. Besiktas [More ...]
Anwara Anakwere zmir moto Streetway! Ọ bụghị 3,5 5 na-ewe Oge
Onye odeakụkọ ọdee akwụkwọ n'okporo ụzọ ọhụụ bụ Timur Akkurt nwalere ohere dị n'etiti Istanbul na Izmir ruo elekere 3,5. Akkurt si eme ya dị ka nke ọma dị ka ụzọ anwale otu n'ime kasị eji igodo usoro ke Turkey Yandex Maps ngwa [More ...]
Ihe oru ngo nke Babadağ Ropeway, nke a na-atụ anya na ọ ga-abụ otu n'ime mpaghara mmebi iwu kachasị amasị na Europe mgbe etinye ya n'ọrụ, a na-atụ anya imezu na 2020. Ihe oru a, nke hibere na August nke 2017, bu n’uche iweta ndi nleta ndi 1 n’otu n’otu afọ Fethiye Power Association Company [More ...]
05 / 08 / 2019 Levent Ozen 1
Ihe ngosi metro nke Istanbul 2019: Na njedebe nke 2030, 776 ga-abụ netwọọdụ ụzọ ụgbọ oloko nke abụọ kachasị ogologo na ụwa mgbe New York gasịrị. Master [More ...]
Emepeere Highzọ Ahia Izmir
Emepeala Istanbul Izmir Emepe emepe: A na-etinye ngalaba ọhụrụ n'ime ọrụ nke nnukwu Istanbul Izmir Motorway Project, nke ga-ebelata oghere dị n'etiti Istanbul na 3.5. Balıkesir - Nkewa Edremit - Ngalaba İzmir nke nwere njikọ Saruhanlı [More ...]
Companieslọ Ọrụ Istanbul Izmir Motorway Construction
Ebe mbido ọrụ a bụ Gebze na Izmit Bay, nke dị n’etiti Dilovası na Hersek Burnu, awara awara awara awara awara awara awara awara awara awara 3 Km na viaducts n’akụkụ abụọ ya ma na-aga n’ihu na Orhangazi na Gemlik. [More ...]
Rozọ Eziga Iziga Izmir Istanbul
Mịnịstrị nke Transportgbọ njem na akụrụngwa nke okporo ụzọ 2 na nkwupụta nke Official Gazette nke enyere akara ụbọchị August 2019, Balıkesir West Junction na Akhisar Junction ka emepere. Gebze-Orhangazi-İzmir nke ejiri teni-rụọ na-Nyefee-Modul rụọ ọrụ [More ...]
Oge Mkpuchi Marmaray
Oge njem njem Marmaray: Nrụpụta ọrụ Marmaray, nke ga-ejikọ ụgbọ okporo ígwè n'akụkụ abụọ nke Bosphorus, na-aga n'ihu ngwa ngwa. Uzo okporo uzo ga-ejikorita onwe ha site na njikọ nke ikuku okporo ígwè n'okpuru Bosphorus. Marmaray Flights [More ...]
Metrolọ Ọrụ ụgbọ okporo ígwè na ọdụ ụgbọ okporo ígwè nke ụgbọ ala Istanbul na ọdụ ụgbọ okporo ígwè: Istanbul Metro na Lianbus (Nrụrụ Ọrụ), Beylikdüzü Metrobus, Systemgbọ okporo ígwè, Aksaray - ahịrị ọdụ ụgbọ elu, Istanbul Obodo ukwu, ọdụ ụgbọ ala na-akwụsị, atụmatụ okporo ụzọ ụgbọ ala Istanbul. [More ...]
Rozọ Awara Akwa Istanbul-Izmir
Wayzọ İzmir Istanbul Onezmir: Otu n'ime ụzọ dị mkpa isi na-ejikọta Marmara na Mpaghara Aegean, Western Mediterranean na Western Anatolia akụkụ ikpeazụ nke 192 kilomita nke Istanbul İzmir Motorway bụkwa 4.8.2019: 16: 00 President na Sọnde [More ...]
Wayo A tụchiri ụgbọ oloko agbachitere na Czech Republic
Na Czech Republic, ụgbọ okporo ígwè lime ahụ mebiri emebi ma gbatuo ya. E biputere foto nke oge ụgbọ oloko ahụ. Ihe ọghọm ahụ mere na usoro 29 n'akụkụ obodo Marianske Lazne na Karlovy Vary na July, n'oge 16.30. Wepụ ụgbọ okporo ígwè [More ...]
A ga-eziga ụgbọ mmiri na Sivas na Sivas ga Azerbaijan
A ga-eziga ụgbọ ibu na-ebu ibu na Sivas na Azerbaijan. Mmeputa bidoro maka ụdị ụgbọ ala nke 2 wagon ụgbọ mmiri. Ọ bụrụ na enwetara nkwekọrịta, a ga-emepụta wagon 600. Ọ bụrụ n'ụgbọ ndị TÜDEMSAŞ mepụtara, ga-enwetara nnwale 36 nde dollar site na Azerbaijan. TÜDEMSAŞ osote onye isi njikwa Mehmet [More ...]
Saudi Arabia kwenyere maka Ọzụzụ Hyperloop
Saudi Arabia, Hyperloop train tube ọrụ bidoro site na ebumnuche nke ụlọ ọrụ Virgin Hyperloop Otu. Site na usoro a, a ga-belata njem ụgbọ oloko ahụ site na 10 awa gaa na nkeji 76. Insgbọ Hyperloop bụ otu n'ime usoro njem njem nke ọgbọ ọhụrụ. Nke a bụ ihe ohuru [More ...]
Tupu amịpụta ahịrị nke ụgbọ ala eletrik iji dọpụta ụgbọelu iji gosipụta ahụ bụ ihe ejiji. Anyị hụrụ ihe atụ ikpeazụ nke nke a na ụdị ọkụ eletrik Mini Mini. Otu ọrụ mgbasa ozi yiri nke ahụ sitere na Ford. Elektrik elektrọnik X-150 maka ọkụ [More ...]
Onye na-ahụ maka IMM zụlitere iji nyere ụmụ amaala onye ọrịa aka ịpụ n'okporo ụzọ
Mgbe ị na-aga n'okporo ụzọ Üsküdar Çekmeköy Metro, a zụrụ azụ maka onye isi obodo Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) iji nyere nwa amaala ahụ dara ọrịa na mberede isi ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Kısıklı. Onye na-ahụ maka nchekwa Ibrahim Ulgen, onye nyeere ndị njem na-arịa ọrịa aka bu ụzọ zọpụta ndụ nwa amaala. Inye oru n'ime Obodo Obodo [More ...]
Ford na-emechi ụbọchị Emoji Ejiri na Emojis Ọhụrụ
Ford kwuputala na ọ tinyela aka itinye eriri elu emoji na ndepụta nke emojis nke Consortium Consortium (Universal Uncode Consortium) kwadoro. Emojis ọhụrụ "Pick-up" ọhụrụ nke Ford ka edepụtara site na Consortium Consortium Universal, nke na-enyocha ma na-akwado emojis. 100 [More ...]
Iwu YHT Iwu Na-elekọta
Iwu ndị TCDD nyere gbasara akpa nke ndị njem na-amasị ịga YHT bụ ndị a. Ọ dị ezigbo mkpa ka ị nyochaa iwu ndị a tupu oge eruo maka njem udo. Enwere ike idozi gị ma ọ bụrụ na ị na-ebu ibu. [More ...]
Dubai Al Maktoum International Airport amalite na 2020
Al Maktoum International Airport (IATA: DWC, ICAO: OMDW) ọdụ ụgbọ elu International dị n'ime ụlọ nke Dubai na United Arab Emirates. 37 kilomita si obodo Dubai. emi odude ke Jebel Ali, ke edem usụk usoputịn Dubai [More ...]
Ụlọ ọrụ DKM meriri ihe mgbaru ọsọ mbụ
Nke anọ nke Nkwado International Sustainable Structures Symposium (ISBS) kapsamında, nke pụtara dị ka akụkụ nke ọrụ European Union, 18-20 na July 2019 na Dallas-Texas / USA, University Ankara-Gazi University-Texas Tech University-Texas A & M Na ụlọ ọrụ nke Ụlọ Ọrụ Mahadum, American Institute of Architects-AIA [More ...]
Otu esi emepụta ụgbọala
Otu esi emepụta ugbo ala LEGIOS bụ ụgbọ elu nke ụgbọ elu Europe, ụgbọ okporo ígwè ụgbọ okporo ígwè na ndị na-emepụta ihe dị iche iche, na ogologo oge nke ahụmahụ na mmepụta, idozi na imeziwanye ụgbọ oloko na locomotives. LEGIOS, ụgbọ ala mmiri, ikuku ụgbọ ala, ụgbọ ala trestle [More ...]
Olee otú ndị ọrụ ugbo ala si arụ ọrụ
A na-ele ọrụ ụgbọ okporo ígwè anya dị ka otu n'ime ọrụ ndị kachasị ike n'ụwa. Anyị anaghị achọpụta otú ụgbọ okporo ígwè na-esi kwụsị ma ọ bụrụ na ị na-agafe. Ebe obibi ọrụ siri ike nke ndị ọrụ na-arụzi ma na-edebe ọdụ ụgbọ mmiri na Lithuania na ihe oyiyi ị ga-eju anya. [More ...]
Çorlu Anniversary TCDD'den 'Video Carrying' Video
Na ncheta nke ọdachi ụgbọ oloko na Çorlu, TCDD Transportation ewepụtara vidiyo na akaụntụ Twitter n'okpuru aha bụ 'Anyị Carry Love'. Ezinụlọ mereghachi omume na vidiyo na ncheta nke ọdachi ahụ. Ọtụtụ narị ndị mmadụ tụfuru ndụ ha 25 ndị mmadụ merụrụ ahụ na Turkey Corlu ncheta nke ụgbọ okporo ígwè ọdachi [More ...]
'Blue' Njem si Izmir na Ankara
Izmir Blue Train, nke a kachasị mma maka ebe obibi ya, akụ na ụba na nkasi obi, na-eleta ebe 3 dị na mpaghara 6 na obodo 43. Njem ahụ na-atọ ụtọ mejupụtara oge 14,5. Ụfọdụ dị mma ma dị ọnụ ala, ndị ọzọ bụ naanị [More ...]
Mkpụrụ na-enweghị ihe mgbochi na usoro ịgba àmà
Site n'iji Üsküdar-Ümraniye metro line, nke a na-arụ ọrụ na Istanbul, anyị na-anụkarị nkwa nke ụgbọ ala ụgbọ ala. Ya mere, olee otu ụgbọ ala ndị a si eme njem n'enweghị onye ọkwọ ụgbọ ala? Anyị ga-akọwa nke a n'isiokwu anyị. Ebe, ntụziaka na njem nke usoro ụgbọ ala ụgbọ ala [More ...]
Usoro IH Tractor Nkwado malitere na Eastern Anatolia
Ileba ih, Southeast ubi ihe haziri ndị ọrụ ugbo na Anatolia, Turkey mbụ anụ ụlọ mmepụta eweta na ọkara akpaka gearbox traktọ. 25 June 2019- Case IH, nke nwere nanị TürkTraktör, na-eweta nkà na ụzụ ọhụrụ na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ [More ...]
Mersin na-amanye mberede na igwefoto
Na Tarsus district nke Mersin, e gburu ndị 1 ma merụọ ndị 3. Ihe mberede ahụ gosipụtara na igwefoto. Ụnyaahụ na 8: 12 LZ 00 ihe eji emepụta ngwá ọrụ na-ebu ndị ọrụ ugbo na-aga 63 site na ịgafe na Yenice. [More ...]
Afyon-Karakuyu Line Weghachite Ngosipụta na Mgbasa
Mgbatị nke Ọwara Snow na Kilomita dịgasị iche n'etiti Divrigi na Erzincan
KARDEMİR malitere Mass Production of Train Wheels na Septemba
Nkwekọrịta Azụmaahịa n'efu iji mee ka Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na Bursa bịaruo nso
Ntinye aka na Mmekorita Turkey-German na Mmemme BTSO
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa August 2019 (318) July 2019 (636) June 2019 (503) Mee 2019 (525) April 2019 (418) March 2019 (520) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (436) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (580) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (555) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (494) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (541) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (536) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (770) September 2014 (598) August 2014 (809) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (831) September 2012 (886) August 2012 (976) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)